Home - Hysan
HysanX opens doors to quality education.
COVID-19 Pandemic မှာ တံခါးပိတ်ပြီးအိမ်မှာနေနေရတဲ့အချိန်တွေကို အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ Education Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
To Be Effective at Working and Learning Online
Hysan Education ရဲ့ အခွဲ HysanX ကို ဘာကြောင့်တည်ထောင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် မိမိနှစ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာဘာသာဖြင့် မိမိအားလပ်တဲ့အချိန်မှာ သင့်တော်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ အဓိကသင်ယူနိုင်စေလိုတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို (workforce capacities) တစ်နေရာတည်းမှာ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
"Learn from the best." ဆိုတဲ့ HysanX ရဲ့ Motto အတိုင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစားနေကြတဲ့ Professionals များမှ အကြံကောင်းများ၊ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များ၊ နည်းစနစ်ကောင်းများကို တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတတ်ကြိုးစားချင်သူများအတွက် နည်းစနစ်ကောင်းများကို HysanX Community မှာလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။